Yintoni iprojekti yakho? | Martech Zone
Zininzi iintshukumo ezenzekayo ngoku kwi ukufaka amanqaku ishishini. Ndiyacinga Klout Kufunyenwe ukugxekwa kutsha nje… kunzima ukuba ngumfo wokuqala kwibhloko nakweyiphi na intsimi. Ndiyabulela ukuba umntu othile uthathe umsebenzi onzima wokuphucula amanqaku egunya lokuqala kwishishini, nangona kunjalo, kwaye ndiyathemba ukuba bayakwazi ukulungelelanisa ii-algorithms zabo kwaye baqhubeke nokuziphuhlisa.
Omnye wabakhuphiswano endibabona bethubeleza kamnandi ngu IProjektha. Ialgorithm yabo ayakhi nje kwindlela yokuziphatha yakutshanje (njengoko iKlout ibonakala injalo), yakhiwe kwiinethiwekhi, amava kunye nonxibelelwano. Nantsi ividiyo echaza iProskore:
IProjkore yongeza enye into entle… ukukwazi ukutshatisa ababoneleli nabathengisi beemveliso kunye neenkonzo. Ukuba ujonga ingcali ye-SEO, inkqubo inokufumana umntu ohleli kakuhle kwaye ekufutshane nendawo ekuyo. Kulungile… ukuvumela ukuba fumana izikhokelo kwaye ulandele amathuba kufutshane, Okanye ukufumana italente ejikeleze nawe ngokunjalo.
Kukho isiphako kwi "Score Professional" efana nale, nangona kunjalo, kwaye loo nto inzima kakhulu kunxibelelwano lomntu. Kukho amawaka ee-PhDs asebenza emva kweenkampani ezinje ngeGoogle, Apple kunye neMicrosoft ngoku eziqaqambileyo, eziguqula umhlaba yonke imihla, kodwa musa ukuzibeka phaya ekuhlaleni. Ndiyakholelwa ukuba la manqaku, njengamanye, qhubeka nokukrola umphezulu kunokuba umbe nzulu.
Ezi algorithms zokuntywila vuza abagqithisileyo kwaye wohlwaye abo bangenisayo. Inyani yile, asinakuba sonke siphumelele… kwaye iinkampani zifuna zombini ukuba ziya kuphumelela. Ke, okwexeshana elifutshane, ndicinga ukuba ezi zicelo zokufumana amanqaku ziyinto emnandi kuthi abafuna ukujongwa. Ndiya kulumkisa amashishini ngokusekwa kwintengiso yawo okanye ekugayeni amaphulo kuwo nawaphi na amanqaku kula maxesha ukuba abathengi okanye abasebenzi bakho bengezizo iibhabhathane zentlalo. Sebenzisa amanqaku apho avakala khona!
Ndiyithanda kakhulu iProskore, kodwa ukugxeka kwam okokugqibela yenye endinayo yokufumana amanqaku kwi-algorithms. Kuhle ukuba ubonelela ngolwazi apho ndikhoyo ngoku… kodwa ulwazi alunamsebenzi de undixelele ukuba ndenze ntoni ngalo. Ukuba i-Proskore icebise abantu ukuba bafumane unxibelelwano ngakumbi, amava ngakumbi, okanye babonelele ngazo naziphi na ezinye iingcebiso ezinkulu, le nkqubo iya kuba namandla ngakumbi. I-Klout ibikade inika ingxelo… kodwa andisayiboni kwindawo yabo.
Akwanelanga ukubonisa abantu indlela abafumana ngayo amanqaku, bafundise indlela yokuphucula!
tags: Igunyakloutamanqaku ekloutiproskoreInqakuukufaka amanqakuukufumana amanqaku kwialgorithm
USteve Jobs: Gxila, umbono, uyilo
I-WordPress Multi-Domain yokungena kwiLog
Ngomhla wama-28 ku-Disemba 2011 ngo-2: 24 PM
Iposi entle uDouglas. Ufile malunga nokuvuza okunqabileyo ngokuchasene nabangenisi. Ngapha koko, sesinye sezizathu zokuba thina (PROskore) sifumane amanqaku abantu ngokusekwe ngaphezulu kwempembelelo zentlalo. Sithathela ingqalelo imvelaphi yemfundo kunye nembali yomsebenzi. Ndiyakholelwa ukuba kuphela kweqonga lokwenza oku…
Siyaqala nje… Enkosi ngesigcino!
Ngomhla wama-28 ku-Disemba 2011 ngo-2: 45 PM
Umthetho oyilwayo-enkosi kakhulu ngokuma kunye nokuqhubeka nomsebenzi omkhulu. Ndijonge phambili ukubona okulandelayo!